Dowladda Mareykanka oo farriin toos ah u dirtay Farmajo iyo Rooble. "Waa inaad wadahadalkii si degdeg ah.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Mareykanka oo farriin toos ah u dirtay Farmajo iyo Rooble. “Waa inaad wadahadalkii si degdeg ah..”
Dowladda ayaa baaq toos ah u dirtay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’isul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka ayaa sheegay in isku dhac siyaasadeed uu burburinayo Rajada Soomaaliya, iyadoo loogu baaqay dhammaan dhinacyada inay ka fogaaaan qalalaasaha.
” Khilaafka siyaasadeed wuxuu burburinayaa rajada Soomaaliya, Waxaan mar labaad ka codsaneynaa dhamaan dhinacyada inay ka waantoobaan rabshadaha.. Waxaan mar kale ugu baaqeynaa Farmaajo iyo MohamedHRoble inay dib u bilaabaan wadahadalkii ay la lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada” ayaa lagu yiri farriinta ka timid Mareykanka ee sida tooska ah ugu socotay Farmaajo iyo Rooble.
Mareykanka wuxuu sheegy in laabashada wadahadalka ay tahay wadada kaliya ee horay loogu socon karo.
Previous articleDowladda Itoobiya oo sheegtay in shaqaaqada Somaliya ay ku kooban tahay magaalada Muqdisho
Next articleGalmudug iyo Hirshabelle oo ka hor yimid Muddo kororsiga Farmaajo (Akhriso: War-saxaafadeed Xasaasi ah)